London Underground ပေါ်မှာ လူတွေ နည်းအမျိုးမျိုးနှင့် အိပ်ကြပါတယ်။ မတ်တတ်ရပ်လည်း အိပ်ကြတယ်။ ထိုင်ပြီးတော့လည်း အိပ်ကြတယ်။ မှီပြီးတော့လည်း အိပ်ကြတယ်။ အထူးသဖြင့် ညနေပိုင်း ရုံးဆင်းချိန်တွေမှာ ပိုပြီး တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ တစ်နေကုန် ပင်ပန်းလာသမျှ ရထားထဲမှာ ဂျုံးဂျုံးဂျက်ဂျက် အသံလေးနဲ့ ငြိမ့်ကြတာပေါ့။ မနက်ပိုင်းတွေမှာလည်း တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ညပိုင်း အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေက မနက်ပိုင်းရောက်မှ ရထားစီးပြီး ပြန်ကြတာလေ။ အဲဒီတော့ ၁၅မိနစ်ရလည်း နည်းသလားဆိုပြီး ရသလောက်အချိန်လေး အိပ်ကြတယ်။ တစ်ခါတလေ အိပ်တာလွန်ပြီး station ကျော်သွားလို့ ပြန်ပြီး စီးရတာတွေလည်းရှိတယ် (မောင်CMS အပါအ၀င်ပေါ့) အခုလည်း ရထားပေါ်မှာ ကျွန်တော် တွေ့ရသလောက် လျှက်တပြတ် မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်တယ်။ အသိတွေများ ဖြစ်နေရင်တော့ ခွင့်လွှတ်နိုင်ကြပါစေသတည်း ... ဟိဟိ ... ကိုယ့်အလှည့်ကြမှ ဘယ်သူချောင်းပြီး ရိုက်မလဲ မသိဘူး
ဓာတ်ပုံ ရိုက်မှန်းသိလို့ တမင်တကာ ပဲ ပေးပြီး အိပ်နေတာလားမသိဘူး
ဟေ့လူ ... ထ ... ထ ... station ကျော်သွားပြီ
London Underground နဲ့ ပက်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာတွေကို တော့ အောက်ပါ Link များမှာ သွားရောက် ဖတ်ရှူ့နိုင်ပါတယ်။ Tube Diary blog မှာ YouTube Movie တစ်ခု ကြည့်လိုက်ရသေးတယ်။ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ သူ့ရဲ့အချစ်ကို Northern Line မှာ တွေ့သွားတဲ့အကြောင်း သီချင်းတစ်ပုဒ် လုပ်ပြီးဆိုထားတာ။ အဟား .... Underground ဇာတ်လမ်းပေါ့ ရှူ့စားကြည့်ပါဦး။
London Underground from Wiki
Tags: london underground, london
ahmeisoekyi 9:20 pm
အေး..သူများကိုရိုက်ပီးး ကျိတ်ပျော်နေ..မပူနဲ့ နင့်အလဲ့ကျ.. နာရိုက်ပေးမယ် ဖိုးချမ်းအိပ်ငိုက်တဲ့ ရှီတိုင်ချိုပီးး ဟီးးးး
CMS 9:38 pm
ဒါချို့ နင့်ကိုပဲ သတိထားရတော့တယ် :P ဒါပေမဲ့ ကြည့်ကြကသေးတာပေါ့ .. အဒူ က အဒူ့ကို ရိုက်မလဲ .. ဟဲဟဲ :P
Sai Linn Thu 5:51 am
ဖိုးချမ်း မင်းကျတော့ မအိပ်တာကျနေတာပဲ...နာကတော့ လစ်ရင်လစ်သလို အိပ်တာ..တခါတလေ စဉ်းစားနေသလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့တောင် ခိုးအိပ်လိုက်သေးတယ်..ဟီးဟီး...နာ့ ရုံးမှာလည်း အိပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်. ..ရီ ရတယ်..
CMS 8:42 pm
ရုံးမှာ ခိုးအိပ်မနေနဲ့ အလုပ်ပြုတ်နေမယ် :P
Myo Kyaw Htun 6:53 am
အင်း ရိုက်ရိုက်.... ဟိုက တရားဆွဲနေမှ ဟုတ်ပေ့ဖြစ်နေဦးမယ်။
p.s: reflection ကြောင့် ကိုချမ်း ပုံကို မြင်ရတယ်။
MELODYMAUNG 10:54 am
တစ်ခါတလေ အိပ်တာလွန်ပြီး station ကျော်သွားလို့ ပြန်ပြီး စီးရတာတွေလည်းရှိတယ် (မောင်CMS အပါအ၀င်ပေါ့)တဲ့ အိပ်တော့ အိပ်ပေါ့ ပြုံးပြုံးကြီးတော့ မအိပ်မိစေနဲ့ ပေါ့ တော်ကြာနေမှားယွင်းပြီး အရူးထောင်ရောက်နေမှ ဟုတ်ပေ့ ဖြစ်နေဦးမယ်။ ကိုယ်တွေကတော့ ရန်ကုန်ကနေမန်းလေးပြန်တိုင်း ရထားခုံပေါ်မှာ ပုံစံ ၁၂မျိုးနဲ့
အိပ်လိုက်သွားတတ်တာ ဟိဟိ(ဘူသူ့မှ ကြောကြဘူးနော်) :P
နှစ်ကူး 11:07 pm
နှစ်ကူးတို့ကတော့ မူလတန်းကနေ အထက်တန်းရောက်တဲ့ထိ... ပုံစံအညိုးည်ိုးနဲ့ အိပ်ငိုက်တာ လေ့ကျင့်ပီးသား... :P
yadanar 5:42 am
ရတနာ ကတော့ အကျင့်တစ်ခုရှိတယ်။
အဲလိုအိပ်နေတာတွေရင် Colour Pen နဲ့သွားဆွဲချင်တာလေ။
ဖိုးချမ်း နင်အိပ်ငိုက်တဲ့အချိန်လာဆွဲရရင် ဘယ်လောက်
MYO HAN HTUN 3:27 am
ငိုက်မရှက် .. ကြိုက်မရှက်ပါ .. ဟီး
CMS 11:21 pm
MKH ... တရားဆွဲလည်း နာမည်ကြီးတာပေါ့ကွာ :P
melodymaung ... ကြော်ငြာဝင်တာလား ... ၁၂ မျိုးဆိုတော့ နည်းနည်းများ များနေမလား လျော့ပါဦး :D
နှစ်ကူး ... Training လာတတ်ဦးမယ် :P
yadanarcho ... ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ ခင်ဗျားလေးဆွဲဖို့ ကျွန်တော် အိပ်ငိုက်ပေးပါ့မယ်ဗျာ :P
Ko Toe ... ဟုတ်တယ်ကိုတိုးရေ ငိုက်ရတာလည်း အရသာတစ်မျိုးပဲလေ :)